Izinhlelo ze-KRK ziqala ukuhlukunyezwa kwama-Audio Tools App - I-NAB Bonisa Izindaba nge-Broadcast Beat, Isakazo se-NAB Show - NAB Bonisa LIVE
Ikhaya » Izindaba » Izinhlelo ze-KRK ziqala ukufakaza uhlelo lokusebenza lwezingoma zomsindo
I-CHATSWORTH, CA, uJULY 18, i-2019 - Izinhlelo ze-KRK, ingxenye yomndeni wama-brand waseGibson, uveza inguquko ye-KRK Audio Tools App ye-iOS ne-Android. Lolu hlelo lokusebenza mahhala lwamathuluzi we-studio ochwepheshe luhlanganisa izinto ezinhlanu ezisebenzayo zokuhlaziya ezisebenzayo nokusebenza okusebenza nanoma yikuphi ukusethwa kokuqapha, nethuluzi elilodwa elinamandla (Isiphakamiso se-EQ) esiza ukuvumela ukuhlola izibukeli ezintsha ze-KRK ROKIT G4 kumvelo ngamunye we-acoustic.
Ukwengeza ithuluzi lokuncoma le-EQ, uhlelo lokusebenza luhlanganisa futhi i-Spectrum Real Time Analyzer (RTA), Amamitha Amanothi, Ukulibaziseka kanye Ne-Polarity Analyzers, kanye neThuluzi Lokuqondisa Ukuqapha elisiza abasebenzisi ukusetha ukuqapha kwabo ngokubeka ngokunembile endaweni yabo yokulalela. Ngaphakathi kohlelo lokusebenza i-generator umsindo enikeza izinketho zokuhlaziya umsindo zomsebenzisi we-sine, i-sine sweep eqhubekayo, umsindo omhlophe nomsindo we-pink-konke okungasiza inqubo yokuhlaziya ezimweni ezahlukene.
"Sifuna ukwakha okuthile-okushintshayo emgqeni omusha we-ROKIT we-G4 ovumela abasebenzisi bethu ukuba bafinyelele ukuxuba okungcono kokugcina jikelele," kuchaza u-Rich Renken, uMphathi weMikhiqizo-Pro Audio Division, i-Gibson Brands. "Ngokulalela okubucayi, abahloli be-G4 bahluke ngokuphelele, nokuthuthukiswa okukhulu kusuka kumugqa we-G3 wangaphambilini. Izinhloso zethu ngeThuluzi Lokuncoma Lika-EQ zizosikisela isimo sendawo futhi size sithole umsebenzisi endaweni yokuqala engcono. Ekugcineni, kusengena ekuthandweni nasekusebenziseni indlebe yakho yomculo, kodwa kuyajabulisa ukuthi lesi sici sitholakale kanye nabanye abakuhlelo lokusebenza. "
Amathuluzi amahlanu wezinhlelo zokusebenza asebenza nanoma yikuphi ukusethwa kokuqapha. Lokhu kuhlanganisa i-Level Meter, esiza ngokulinganisela kwezinga lokuqapha ukuqinisekisa ukuthi bonke abaqaphi basesilinganisweni seDB, kanye nesici sokuhlaziya okusizayo esisiza ukubala isikhathi kusuka esangweni ngalinye kuya ezindlebeni zomsebenzisi. Ukwengeza, umsebenzi we-Polarity wohlelo lokusebenza usetshenziselwa ukuqinisekisa ukuxhuma okulungile kwabalindi, ukunciphisa ukulahlekelwa kwezinto eziphansi nokukhiqizwa kokucabanga okungalungile-imiphumela yabahloli abaphelelwe yisigaba, kanti i-Spectrum RTA ne-Sound Generator inkulu yokuthola ama-nuances kunoma iyiphi imvelo.
Kubuye kufakwe isici esingakaze senziwe sokulinda kwe-Monitor, esetshenziselwa ukucacisa ukubekwa okuhle kweziqapheli eziningi ngaphakathi kokusondela. Lokhu kufezwa ngokubeka idivaysi ehlakaniphile kumqapha ngamunye ngokwehlukana bese ujikeleza ezingeni elifanele le-angle. Ithuluzi lesithupha, elilodwa kuphela kubanikazi be-ROKIT G4, ithuluzi le-EQ lesikhuthazo esiza abaqaphi be-acclimate endaweni ethile ngokuhlaziya umsindo we-pink owenziwe ngohlelo lokusebenza bese bephakamisa ukusetha kabusha okungcono kakhulu kwe-EQ, okubekwe ngesandla ngemuva kokubukwa kwe-G4.
"Sijabule kakhulu ukunikeza lolu hlelo lokusebenza kumphakathi wokuqopha womculo. Ithimba lethu libeke amandla amaningi nokucwaninga ekuthuthukiseni uhlelo lokusebenza, okuhlangene nabaqaphi be-G4, linikeza into engakaze ikhishwe emakethe-kunoma yiliphi iphuzu lentengo, "kusho uJimmy Landry, uMqondisi Wezokukhangisa Omhlaba Wonke- I-Pro Audio Division, i-Gibson Brands. "Impendulo esiyitholile emisha, futhi umsindo ophezulu we-ROKIT G4s ube mnandi kakhulu. Ngokukhululwa kohlelo lokusebenza lwe-KRK Audio Tools, sijabule ukuzwa ukuthi abantu badala kanjani kuma-G4s athuthuka phambili. "
Android Uhlelo lokusebenza lwe-Android Izibukeli ze-G4 I-Gibson Pro Audio iOS I-KRK ROKIT Izinhlelo ze-KRK Mobile App Ama-spears nama-Arrows	2019-07-18
Ngaphambilini: I-Youngster yakha ama-workflows anamandla nge-BLG
Olandelayo: I-Avid Ihambisa Ukusabalalisa Kwemidlalo ku-Quarter Million Avid Link App Abasebenzisi